Visual ရှေ့ပြေးပုံစံ | အသွင်အပြင်ရှေ့ပြေးပုံစံ - Createproto - Createproto Tech Co. , Ltd.
လျှောက်လွှာများ / Visual တင်ပြချက်
Presentation Model များသည်ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်နှင့်တူသလိုခံစားရရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ CNC စက်နှင့်အပြီးသတ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံနည်းပညာများဖြင့် CreateProto သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအမြင်အာရုံတင်ဆက်မှုပုံစံများကိုတကယ့်ထုတ်ကုန်များနှင့်တူညီသည်။ ဤရှေ့ပြေးပုံစံများသည်အုပ်စုများ၊ ကုန်စည်ပြပွဲများနှင့်အခြားအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏တီထွင်မှု၊ အတွေးအမြင် (သို့) ထုတ်ကုန်ကိုစီးပွားဖြစ်ရောင်းချခြင်း
Presentation Prototype ဆိုတာဘာလဲ။
Presentation prototype သည်အဆုံးတီထွင်မှု၏ဒီဇိုင်းမည်သို့ပုံဖော်မည်ကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်၏သင်၏ 3D visual model ကိုပြသရန်နှင့်ပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလိုအလုပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ concept model တွေလိုပဲသူတို့ကိုကြမ်းတမ်းပြီးအရောင်မကျစေချင်ဘူး။ concept model သည် 3D ပုံကြမ်းနှင့်တူသော်လည်းတင်ဆက်မှုပုံစံသည်အမှန်တကယ်မြင်သာထင်သာရှိသော 3D rendering နှင့်တူသည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်တင်ဆက်မှုရှေ့ပြေးပုံစံသည်ထုတ်ကုန်၏အလုပ်သရုပ်ပြခြင်းကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤရှေ့ပြေးပုံစံသည်ထုတ်ကုန်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုခြုံငုံ။ ကြည့်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ပစ္စည်းများသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်ဒီဇိုင်းအရည်အသွေးနှင့်ဟန်ချက်ညီစေရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒီရှေ့ပြေးပုံစံသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီကုန်ပစ္စည်းရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုပြသရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Visual Presentation ရှေ့ပြေးပုံစံ၏စီးပွားဖြစ်တန်ဖိုး
တင်ဆက်မှုပုံစံများကိုလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မလိုသည်ဖြစ်စေ ၄ င်းတို့သည်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ၊ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်နှင့်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စီမံကိန်းတိုင်းတွင်ဤလိုအပ်ချက်မရှိပါ။ သို့သော်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအသုံးပြုပါက၎င်းတို့သည်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာများဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တင်ဆက်မှုပုံစံများသည်စားသုံးသူများနှင့်အာရုံစူးစိုက်စစ်ဆေးခြင်းတွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရုံသာမကဒီဇိုင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်ထုတ်ကုန်အပေါ်သူတို့၏သဘောထားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအကဲဖြတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း၊
တင်ဆက်မှုပုံစံများကိုလောတ သုံး၍ အခြေအနေများ
သင်၏ Visual Presentation Prototypes အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း
သင်၏ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အရ၊ တင်ဆက်မှုရှေ့ပြေးပုံစံကိုဒီဇိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအလုပ်လုပ်သောရှေ့ပြေးပုံစံဖြင့်မဖြေရှင်းမီသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိုပါကသင်၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့နှင့်အမြင်အသွင်အပြင်ရှေ့ပြေးပုံစံကိုစောစောပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သို့မှသာသင်၏အတွင်းပိုင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုအလုပ်လုပ်သောရှေ့ပြေးပုံစံ၏ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်စျေးကွက်သုတေသနကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြုလုပ်လိုပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်လိုင်စင်ရသူများ၏ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္combာန်ပေါင်းစပ်ထားသောတင်ဒါမော်ဒယ်လ်များကိုလည်းပြသနိုင်သည်။
သင်လိုအပ်သမျှ CreateProto သင်၏စီးပွားရေးကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံနည်းပညာများကိုအမြဲတမ်းပေးနိုင်သည်။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည်သင့်အားအကုန်အကျသက်သာပြီးမြန်ဆန်သောရှေ့ပြေးပုံစံရွေးချယ်ခြင်းများဖြင့်သင့်အားအကောင်းဆုံးသောတင်ဆက်မှုမော်ဒယ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၏ ဦး ဆောင်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်။
CreateProto သည် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို Stereolithography (SLA) နှင့် Selective Laser Sintering (SLS) အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ CAD ဒီဇိုင်းမှသည်သင်၏လက်ထဲရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့နှင့်နောက်ဆုံးသင့်အဖွဲ့၏ရှေ့မှောက်၌၎င်းသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ သင်၏ဒီဇိုင်းများ၊ အသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတည်ပြုရန်၊ အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်ဖောက်သည်များအားစျေးကွက်သို့မသွားခင်တွင်ကုန်ပစ္စည်းတွင်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုညွှန်ကြားရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်ကိုမြင်ယောင်စေရန်သင်နှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်မည့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်စီမံကိန်းမန်နေဂျာများအပြည့်အစုံရှိသည်။
သို့မဟုတ် CNC ရှေ့ပြေးပုံစံ?
Post Finishing ပံ့ပိုးမှု
သင်တစ် ဦး အလှကုန်ရှေ့ပြေးပုံစံသို့မဟုတ်ပန်းချီရှေ့ပြေးပုံစံရချင်ပါသလား? သင်၏ဒီဇိုင်းများကိုလက်တွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်အသင့်ဖြစ်သည့်အလွန်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်ထားသောရှေ့ပြေးပုံစံအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သူတို့တစ်ခုချင်းစီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသွင်အပြင်ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာစီမံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်သူတို့ကအသေးစိတ်တိုင်းကိုဂရုစိုက်သည်။
Post finish ကိုပုံနှိပ်စက်အသစ်ဖြင့်စက်အသစ်ကိုပေးမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရင့်မြင့်မားသောဆောက်လုပ်ရေးဌာနသည်လက်ဖြင့်ပြီးခြင်း၊ ပုံဖော်၊ အရောင်ကိုက်ညီသောဆေးသုတ်ခြင်း၊ texture နှင့် soft-touch အပြင်အဆင်နှင့်တိကျသောတပ်ဆင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအသွင်အပြင်အတွက်စီးပွားဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုများစွာကိုအသုံးပြုထားသည်။
ဖောက်သည်အားနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာအတုယူသောရှေ့ပြေးပုံစံကိုထောက်ပံ့ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အဆင်ပြေမှုအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များကိုတန်ဖိုးမြှင့်အထောက်အပံ့ကို ပေး၍ ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးသည်။
cnc ရှေ့ပြေးပုံစံ, အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ပြေးပုံစံ, Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ, 3d ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံန်ဆောင်မှုများ, CNN Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ, လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း,